China Juda kiln -300T / D tsipika famokarana -Zavamaniry sy mpanamboatra tetikasa PEC | Juda
Drafitra teknolojia ：
Rafitra ady: ny vato sy ny arina dia entina mankany anaty siny vato ary arofenin'ny arina misy fehikibo; ny vato milanja dia ampidirina ao anaty fehikibo fampifangaroana amin'ny alàlan'ny mpamatsy.
Rafitra famahanana: ny vato sy ny arina arovana ao anaty fehikibo mifangaro dia entina mankany amin'ny hopper, izay ampandehanin'ilay winder mba hampivezivezy etsy sy eroa ny hopper ho an'ny famahanana, izay manatsara ny habetsahan'ny fitaterana ary mahatratra ny fahombiazana lehibe sy ny fitsitsiana angovo.
Rafitra fizarana: ny fangaro amin'ny vato sy arina dia ampidirina ao anaty hopper buffer amin'ny alàlan'ny feeder ary mankany amin'ny feeder rotary. Ny fangaro dia ampiarahina amin'ny ambaratonga ambony amin'ny lafaoro amin'ny alàlan'ny feeder rotary marobe.
Rafitra fanariana sokay: aorian'ny fampangatsiahana ny vato sokay vita sokitra, dia alefa amin'ny fehin-kodiarana sokay avy amin'ny masinina manafaka efatra sy faritra roa amin'ny valizy hidin-drivotra ny sokay vita. Raha sendra misy tifitra variraraka dia azo ahitsy ny lalana sy ny habetsaky ny famoahana sokay mba hahatratrarana ny tifitra sy ny fisintomana azy.
Rafitra fanesorana vovoka: aorian'ilay volavolan-tsolika narotsaka, ny vovoka misy setroka sy gazy aloha amin'ny alalàn'ny mpanangona vovoka cyclone mba hanesorana poti-vovoka be dia be; Avy eo ao anaty sivana kitapo hanesorana poti-vovoka kely; Aorian'ny fidiranao amin'ny sakan-tsarimihetsika anaty rano dia hikorontana ny etona flue ny sarimihetsika rano amin'ny fotoana rehetra, ary ny setroka feno vovoka dia ho lena. Hiditra ao amin'ny farany ambany amin'ny fantsakan'ny vovoka izy miaraka amin'ny rano mikoriana ary avoaka ao anaty fitoeran-drano sedimentation. Aorian'ny rotsakorana, haverina ny rano madio.
Rafitra fanaraha-maso herinaratra: mandray rafitra Alemanina Siemens fanaraha-maso solosaina, tsipika famokarana mandeha ho azy tanteraka, fitsitsiana vola, kalitaon'ny vokatra azo antoka.
Previous: Fivoriamben'ny tsipika famokarana sokay
Manaraka: Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 tsipika famokarana lafaoro famolavolana tontolo iainana
Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Manao Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide, Famoronana Hydroxide Kalsioma, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide,